Izindaba - Izikhwama zokupakisha ze-hypochlorous acid disinfectant
Ithonywe ngu i-COVID-19, kunesidingo esikhulayo semikhiqizo elwa namagciwane njenge-magciwane kanye notshwala.
Kusukela ekuqaleni konyaka ka-2020, oimishini yakho kukhona ukusebenza amahora angama-24 njalo usuku lwe imakethe ye hypochlorous acid magciwane kanye notshwala.
Sithumela izikhwama ezingaphezu kwama-100000 ompompi (ngenyanga) emakethe yaseJapan kusukela ngonyaka ka-2020. Amandla adume kakhulu amalitha ama-5 namalitha angama-20 oketshezi lwe hypochlorous acid magciwane kanye notshwala. Sivame ukuthumela ku-KIX ngendiza, noma sithumele ngolwandle e-Osaka port, ethekwini le-NAGOYA naseTOKYO Port.
Ngaphandle kwesikhwama sethu ebhokisini (i-cheertainer ne-ldpe cubitainer), singathanda ukwethula yonke imikhiqizo yethu yokupakisha:
1. Uchungechunge lwe-SJA —- Isikhwama saseCubitainer esisebhokisini, impahla yplastiki ethambile ye-Ldpe, ukusonga, asikho isibambo sokuphatha. Usayizi ojwayelekile 1L-25L.
2. Uchungechunge lwe-SJB- Isitsha samanzi esigoqekayo, impahla ye-Ldpe, i-BPA mahhala, ukusetshenziswa kwangaphandle ikakhulu, nesibambo sokuphatha. Usayizi ojwayelekile 5L, 10L no-20L.
3. Uchungechunge lwe-SJC -Ijeri eligoqekayo elingasetshenziswa, impahla ye-Ldpe, ipulasitiki ethambile, ephathekayo, eqinile, ukusetshenziswa kwangaphandle, nesibambo sokuphatha. Singumhlinzeki omkhulu we-UNHCR walolu hlobo lomkhiqizo. Usayizi ojwayelekile 10L no-20L.
4. Isikhwama esimile mpo ebhokisini, esenziwe ngongqimba lwe-PA + PE, eshibhile kune-ldpe cubitainer, isitifiketi se-EU, engasindi, gcina isikhala sokugcina, sinciphise imali yokuthumela, idizayini entsha enezimbobo esikhwameni ngasinye, ukuma kwekhiyubhu kufanelana nebhokisi kahle , ihlala isikhathi eside ngokwanele, inezihlanganisi / izesekeli ezahlukahlukene. Usayizi ojwayelekile 5L, 10L, 18L, 20L.
Singabakhiqizi abaneminyaka engu-10 yokwenza ulwazi. Sidayisa lolu hlobo lwezikhwama e-Alibaba iminyaka eyi-9. Ikhasimende 'isidingo nesiphakamiso kungamandla ethu okushayela, ukwaneliseka kwamakhasimende eyethu ukuphishekela. Singa manje ebuka dlulisela ku ukubambisana okukhulu namakhasimende aphesheya kwezilwandle ngokuya ngezinzuzo ezihlanganyelwe.
Sikholwa ngokuqinile ukuthi abantu bomhlaba bazoyinqoba i-COVID-19 esikhathini esizayo esiseduze kakhulu.